Dhoohiinsa boombii magaalaa Deesstti lubbuun namoota shanii babarte | Oromia Shall be Free
bilisummaa 3 weeks ago	Comments Off on Dhoohiinsa boombii magaalaa Deesstti lubbuun namoota shanii babarte
Naannoo Amaraa Magaala Dasee Bulchiinsa Boombaa Wuhaa jedhamu keessatti dhohiinsa boombii qaqqabeen lubbuun namoota shanii darbuu poolisiin hime.
Boombii kana kan dhoosan hidhattoota to’annoo jala oolfaman poolisiin hiikkachiisaa jiru jedhameera.
Akka Poolisiin jedhetti, haleellan boombii kun kan qaqqabe namoonni yakka lubbuu namaa balleessuutiin barbaadamaa turan erga qabamanii booda boombii darbataniinidha.
Namoonni yakka kanaan shakkaman afur yoo ta’ataman, naannoo Dasee Aanaa Xid Gabayaa jedhamuu ka’anii gara magaala Daseetti seenun badii garaa garaa raawwachuuf osoo jedhanii tumsa Bulchiinsa Magaala Daseefi poolisiin Walloo Kibbaa taasisaniin to’atamanii qorannaaf buufata Poosilii 4ffatti geeffamaniiru.
Erga buufata poolisiitti geeffamanii booda hidhannoo isaanii akka hiikkatan gaafatamanis diduudhan boombii hidhatanii jiran dhoosun shakkamtoota dabalatee poolisii idilee tokko, humni addaa tokko lubbuun darbuu danda’eera.
Walumaa galatti namni shan yoo du’u, shakkamtoota keessaa namni tokko harka laatera jechuun Bulchiinsa Magaala Daseetti Itti-gGaffatamaa Waajjira Poolisii kan ta’an Komaandar Asmiin Mulaat ibsaniiru. Guutuu isaa asirraa dubbisi
Tags amaaraa BBC afaan oromoo dasee deessee naannoo Wallo
Previous Sagantaan dorgommii Qur’aanaa magaalaa Finfinnee
Next Ummanni Oromoo jechoota Abiyyi dubbateen sobamuu hin qabu